WHO IS WHO IN BURMA: တပ်ရင်း၁၀၄ ခိုးရာပါ ကလေးကို ၂သောင်းခွဲ ပေးဝယ်
တပ်ရင်း၁၀၄ ခိုးရာပါ ကလေးကို ၂သောင်းခွဲ ပေးဝယ်
“ကလေးကပြောတာက သူ့ကို အတင်းပါးစပ်ပိတ်ပြီး ခေါ်သွားတယ်၊ တပ်ကိုရောက်တော့ ပျားလေးက မင်းဟာမင်းဝင်တာလို့ ပြောခိုင်းတယ်၊ ပြန်ထွက်လာရင် ဓားနဲ့ ထိုးသတ်မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ပြောပြီး ပိုက်ဆံ ၂ သောင်းခွဲကို ဗိုလ်မှူးဆီက လက်မှတ်ထိုးယူသွားတယ်”
“ဗိုလ်မှူးကို ကလေးက အသက်မပြည့်သေးဘူး ဦးနှောက်လဲ ညဏ်ရည်သိပ်မမှီဘူးလို့ ပြောတာကို အသက်မပြည့်တာလဲ မလိုဘူး စစ်တပ်မှာရတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်၊ စစ်တပ်ထဲရောက်ပြီးရင် ပြန်ထွက်လို့မရဘူး၊ တကယ်လို့ ကလေးကိုခေါ်သွားရင် မိသားစုတခုလုံး ထောင်ဝင်စာတွေ့ရမယ်လို့ ဗိုလ်မှူးက ပြောလိုက်တယ်”
ကလေးကို ခြိမ်းခြောက်ခေါ်ဆောင်သွားသူ ပျားလေး (ခ) မျိုးသန့်ဆိုသူမှာ မော်လမြိုင်မြို့၊ ဘဲကုန်းရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်းတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး စစ်တပ်အာဏာပိုင်များနှင့်ပေါင်းကာ ကလေးငယ်များကို စစ်သားအဖြစ် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေသူဖြစ်သည်။
Labels: ဗိုလ်မှူး Major
Entry Fees For State Schools
နအဖ ရဲ့ ပညာရေး၊ ဒဂုံ ၁ ဝင်ချင်လျင် ၁၂သိန်းပေး
Nay Htoo, The Swine Militia
ရယက ဥက္ကဌ နေထူး ၊ စွမ်းအားရှင်ခေါင်းဆောင်
Family Of Kangaroo Court Judge Suffer
အမျိုးယုတ်အိမ် ခဲပေါက်ကြ အမျိုးယုတ်မိသားစုကို ဆဲဆိ...
အမျိုးယုတ် ညီညီစိုး ရဲ့အိမ် နံပါတ်
Myint Naing, Assistant Attorney General
သားပိုက်ကောင် တရားရုံး မှ လက်ပါးစေများ
Kangaroo Court’s Crooked Creeps
Commander Chop Off Civilian's Hands
ကြိုးတုပ်ထားသူ ကို ဓါးဖြင့် ခုတ်သော မြန်မာ့တပ်မတော...
Myanmar Military Buys Abducted Children
Makeshift Court Judge Too Scared To Live At Home...
Burma Is Definitely Peaceful And Developing.... Bu...
စင်္ကာပူသာလျင်အမိ၊ စင်္ကာပူသာလျင်အဖ၊ စင်္ကာပူမှာသာလျင်တပ...
'Myanmar Military' Parents From Hell
သူရဲဘောနဲသော ခမရ ၅၁၄ မှ မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိများ...
Myanmar Military Abduct Two Boys
မြေခွေးလိုကြံ မြေခွေးလိုကျင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး ဗို...
The Cancer of Corruption, PDC Style
စံနမူနာ ပြောင်မြောက်လှသည့် ခရမ်း မယကဥက္ကဌ
Turned Up Late For Forced Labour ? You Are Fired
Who Raped The Seven Year Old Girl ?
ကြက်ကြက်ဆူအောင် ပူလောင်နေသော နမ့်ခမ်း မယကဥက္ကဋ္ဌ
၇ နှစ်သမီး အား မုဒိန်းပြုကျင့်မှု
ILO Informer's Family Targeted As Authorities Took...
ရန်ငြှိုးတကြီးဖြင့်ရှက်ရမ်းရမ်း သော အာဏာပိုင်မျာ...
Now You Are Talking, Minister
အလုပ်လုပ်သော ဝန်ကြီး ဌာန
PDC Encourages Corrupt Official
မယက မနိူင်သော တင်မောင်ဝင်း
PDC Robbed Crop
ပဲ ဓမြ ဦးနီကွေး နှုတ်ပိတ်ကြေး ပေးရန် ကြိုးစား
PDC Chairman Throws Tantrum At Farmers
မသာယာ မအေးချမ်းသော မယက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်စိုး
The Genitals Burning Case
အင်္ဂါမီးရှို့စစ်ဆေးမှု နှင့် ပါသက်သူများ
သူရဲဘောကြောင်သော ခလရ ၂၉၉ မှ ဗိုလ်ကြီး
Terrorist Major Khin Maung Chin, LIB 107
ရွာသားသတ်ပြီး ရွာမီးရှို့ သော ဗိုလ်မှူး ခင်မောင်ချ...
Second Lt Saw Lwin, The Rapist
မုဒိန်းကျင့် သော ဗိုလ်စောလွင်